UBANYI Pụrụ Iche Maka ire! | EUROPE - SLOVENIA - CASTLEVINICA.COM
Castle akụkọ ihe mere eme
Uwe nke ogwe aka
Ebee ka Castle dị?
UBANYI Pụrụ Iche Maka ire!
Thelọ mgbidi ochie nke akụkọ ihe mere eme mgbe emezigharị zuru ezu site na iji 100% ihe adịchaghị. Emezighari kpamkpam site na iji okwute, iko na osisi mee ihe, puru iche iche n'ime ụlọ ọ bụla na n'èzí iji mepụta Familylọ Ezinụlọ Zuru Okè!
Familylọ nnukwu ụlọ ochie nke 1082
Mgbe emezigharị zuru ezu na ihe ndị dị elu. Emere ya dị ka ụkpụrụ nke iji Nkume, Glass na osisi. Anya pụrụ iche n'ime ụlọ ọ bụla na n'èzí. Ezigbo ezinụlọ ezinụlọ gị !!
The Old Castle bụ a pụrụ iche ncheta nke ochie ije na ókè-ala na Croatia. Lọ ukwu ahụ ka eweghachiri site na iji ihe ọgbara ọhụrụ kachasị elu na nke kacha elu, wee tinye ya n'ọrụ, enyere ikike HASAP.
Mpaghara nke ụlọ a bụ 1 100 sq. M nke gụnyere:
Halllọ ezumike na mbara ala nke na-ele osimiri ahụ anya
Ezigbo ụlọ obibi 3 maka mmadụ 10
Ofụri Esịt ọkachamara kichin maka ọrụ
Ihe mgbagwoju anya na sauna, ime ulo ihịa aka na jacuzzi.
Lọ inyeaka nwere mpaghara nke 150 sq.m.
4500 sq.m. ókèala a na-edozi nke ọma.
Nweta ngwa ngwa
Castle ochie dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Slovenia na mpaghara ndị njem nleta Dolenjska. Nnukwu ụlọ bụ ihe ncheta ụkpụrụ ụlọ, ozi banyere nke dị na Wikipedia
Ọmarịcha spa na-ekpo ọkụ "Dolenjske Toplice", nkuzi golf ọkachamara nwere oghere 18, ebe a na-egwu ski sk SC Bela dị nkeji 30 site na ụlọ ahụ. Nnukwu ụlọ ahụ dị 100 mita site na ngafe oke na Croatia, 100 mita site na osimiri.
Nnukwu ụlọ ahụ dị nke ọma: nkeji 50 site na Oké Osimiri na 40 nkeji site na ọdụ ụgbọ elu mba Zagreb.
Ime ụlọ pụrụ iche
Naanị Nkume Nkume na Osisi
Igwe osisi ịsa ahụ pụrụ iche
Ulo osisi di iche nke osisi puru iche, okwute oke osimiri na akpu miri. Ala osisi na ime ụlọ ịwụ na ịsa ahụ site na ntụ ntụ.
Ngwongwo di iche
E nyere iwu ka arịa ụlọ niile dị na England na Italytali. Ngwongwo niile eji eme omenala bụ ejiri aka mee.
Oak sink na osisi ala
A na-eji osisi oak eme ụlọ ịsa ahụ niile. Ala ndị ahụ bụ mkpokọta nke pebbles oké osimiri na ntụ na-ekpo ọkụ.
Akpụkpọ anụ si England
Ngwongwo akpụkpọ anụ niile na-esite na England. Skinka nká. Pụrụ iche na ndị mara mma.
Fireplaces na nnukwu ụlọ
Na mgbakwunye na underfloor kpo oku, na nnukwu ụlọ nwere 3 ebube Fireplaces. A na-eme ọkụ ọkụ n'oge ochie, mee ka ụlọ ahụ dị ọkụ zuru oke ma nwee ụdị pụrụ iche.
Mmiri na ime ụlọ ịwụ nwere ala osisi
Mmiri mmiri nile nwere osisi ala nke eji ọkụ mee ash.
Unique n'èzí uzo nke ulo
A pụrụ iche echiche nke osimiri si 13 mita elu e wusiri ike mgbidi!
Nkeji 50 gaa n'oké osimiri Croatian dị ịtụnanya
Nkeji 40 gaa ọdụ ụgbọ elu mba Zagreb
Nkeji 3 gaa Osimiri Kolpa
Itinye echiche nke osimiri
Mmetụta echiche nke osimiri nke kewara Slovenia na Croatia
Nnukwu ụlọ ahụ na-eli ahịhịa ndụ
Lọ ukwu ahụ gbara akwụkwọ ndụ. E nwere ọtụtụ osisi, ọhịa, mara mma green ubi gburugburu nnukwu ụlọ.
Jacuzzi na nnukwu sauna
Jacuzzi na sauna buru ibu nke nwere mgbidi nnu n’ime ulo. Jacuzzi na-enye ọmarịcha osimiri.
Lee site na mgbidi ebe e wusiri ike
Lee site na mgbidi ebe e wusiri ike nke dị mita 13 n'ịdị elu. Ejiri nkume ndị sitere n'okike kee mgbidi ahụ, nke dị 1 mita.
3 ele teres
2 elu na otu ala teres. Ha niile nwere nnukwu echiche, imewe.
Wine okpuru ulo na kemeghi okpomọkụ. Ezigbo maka ịchekwa nchịkọta mmanya gị.
Castlọ Ezinụlọ Gị
Dee onwe gị na History. Zụta Ọ Bụghị Nanị Reallọ Ahịa!
Echiche Ikuku X
Echiche nke nnukwu ụlọ site na nnụnụ ụgbọ elu na-aga n'akụkụ osimiri na Croatia.
Echiche nke ikuku Y
Lee ụlọ eze si na elu nke nnụnụ si n'akụkụ osimiri ahụ
Ọmarịcha ụgbala ahọrọla ụlọ elu nke nnukwu ụlọ ma na-akwụsịkarị ebe ahụ.
Stonelọ ochie ahụ ochie. Mgbe emezigharị zuru ezu na ihe ndị dị elu.
Oldlọ ochie ahụ bụ ihe ncheta pụrụ iche nke ije ochie nke dị na Slovenia, na ókèala ya na Croatia. Enweghachila ya n'ụzọ zuru oke site na iji ihe ọgbara ọhụrụ, ihe dị elu ma ka na-asọpụrụ nsọpụrụ nke narị afọ nke mbụ na nke na-ahụ anya. Enwetara ikike HASAP niile iwu n'oge nrụzigharị dị mkpa.
Mpaghara nke ụlọ a bụ 1100 sq. Mita (ihe dị ka 3609 ') nke gụnyere:
* Winterlọ Nzukọ Ezumike na ọmarịcha mbara nke na-ele osimiri dị nso anya
* 3 ụlọ okomoko nke nwere oghere maka ndị enyi gị na ezinụlọ 10
* A zuru ezu onwem, ọkachamara àgwà kichin mpaghara
* Spa mgbagwoju na-atụrụ ndụ na sawụna, ịhịa aka n'ahụ parlor & akwa mma jacuzzi.
Lọ inyeaka nwere mpaghara nke 150 sq.m. (ihe dị ka 492 ')
4500 sq.m. (ihe dị ka 14764 ') nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'èzí
Dị mfe inweta
Castle O ochie dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Slovenia na mpaghara ndị njem nleta Dolenjska. Nnukwu ụlọ n'onwe ya bụ ihe owuwu ụlọ, na ọbụnadị nwere peeji Wikipedia nke ya! Lee wikipedia.org
Emi odude ke minit 30 site na ihe onwunwe bụ ama thermal spa "Dolenjske Toplice", skai eme SC Bela na ọkachamara, 18 oghere golf ọmụmụ. Ọ dịkwa obere mita 100 (328 ') site na ịgafe ókèala na Croatia, yana 100 mita site na ọmarịcha osimiri Kolpa.
N’ebe dị mfe ịnọ nanị minit 50 site na Oke Osimiri Croatian na njem nkeji 40 site na ọdụ ụgbọ elu mba Zagreb, ị nwere ike ịnweta ihe ịtụnanya a dị ka ebe ị na-aga ọtụtụ afọ nke ncheta na ncheta pụrụ iche na-abịanụ!
tụgide ya Ntụtụ Pinterest
Ihe ngosi panoramic a di egwu nwere ike ibu nke gi!
Akwụkwọ Mural pụrụ iche na Nkume Dị Oké Nkume
Ime ụlọ erimeri nwere ọmarịcha ọkụ na firelọ Elu oge ochie
Mmanya nke nnukwu ụlọ a
Anyị ga-enye ndị na-azụ ihe nke nnukwu ụlọ!
8344 Slovenia, Vinica, Vinica 15
Stonelọ ochie ahụ ochie.
T: + 386 64 177 151
Vinica 15, nomrnomelj, Slovenija
MIRAG EGO doo
Arịrịọ maka ozi
Nkọwa banyere Castle
Ebe obibi abụọ dị na thelọ Elu ahụ
Nilọ obibi pụrụ iche na Jacuzzi, Sauna na Chain Bed
Lọ obibi pụrụ iche na ịwụ ahụ osisi na echiche panoramic
Ime ụlọ pụrụ iche nke nwere ekwú ọkụ na echiche panoramic
Ọnụ ụzọ mbata
Ime ụlọ erimeri
2021, CASTLEVINICA.COM Kwadoro site na Shopify